News Collection: अनमिन गएपछि युद्ध?
अनमिन गएपछि युद्ध?
काठमाडौं । संविधान निर्माण हुन नसके जनविद्रोह गर्ने निर्णय गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको पालुङटार विस्तारित बैठक सम्पन्न भएपछि मुलुकको राजनीति झन् अन्योलतर्फ धकेलिएको छ।
शान्ति र संविधानको यात्रालाई सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्यामउन मुलुकले सहमतिको राजनीति खोजिरहेको अवस्थामा माओवादीले आफूले चाहेको जनसंविधान जारी गराउन संघर्षको बाटो समात्ने रणनीति अख्तियार गरेकाले अब माओवादी र अन्य दलबीचको द्वन्द्व झन् बढेर जाने देखिएको छ। विश्लेषकहरू जनसंविधान जारी गर्न माओवादीले सदन, सरकार र सडक तीनवटै मोर्चामा एकसाथ धावा बोल्ने नीति लिएकाले मुलुक युद्धको बाटोमा गएको संकेत देखिएको बताउँछन्। यद्यपि माओवादीभित्र विद्रोहका लागि बाटो तय गर्ने विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईबीच फरक धारणा रहेकाले पनि माओवादीले सोचेजस्तो सहजै विद्रोह हुने अवस्था भने छैन। माओवादीले चाहेअनुसारको संविधान बनाउनका लागि सरकारको समेत नेतृत्व लिनुपर्ने निचोडमा माओवादीका नेताहरू पुगेका छन्। त्यसका लागि भारतलाई रिझाएर आफू प्रधानमन्त्री हुने योजनामा प्रचण्ड लागेका छन्। पार्टीका क्रान्तिकारी कार्यकर्तालाई रिझाउनका लागि प्रचण्डले विद्रोहको भाषा बोल्न छोडेका छैनन्। तर, प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था विकसित भइरहेको छैन। एक हजारभन्दा बढी लडाकुलाई पालुङटार बैठकमा सहभागी गराएपछि दल र माओवादीको दूरी झन् बढेको छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा माओवादी संविधान निर्माणका लागि दत्तचित्त हुनुपर्ने थियो। तर, माओवादीले धम्की र विद्रोहको भाषा बोलेर अन्य दललाई आफ्ना एजेन्डामा सहमत गराउन 'थ्रेट' को राजनीति गरिरहेकाले पनि मुलुक द्वन्द्वमा धकेलिने आधार खडा भइरहेको छ। कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादी दलले माओवादी एजेन्डा अस्वीकार गरिरहेकाले मुठभेडको राजनीति सुरु हुने दिन त्यति टाढा छैन। नेपालको शान्ति प्रक्रिया अनुगमन गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन अनमिन नेपालमा पुस मसान्तसम्म मात्रै रहने छ। त्यसपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा दलबीच सहमति भइसकेको छैन। अनमिनलाई पुनः राख्न तथा शान्ति प्रक्रिया अनुगमन गर्ने अर्को निकाय खोज्न पनि दलबीच राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्नेछ। अनमिन जाने मिति आउन अब डेढ महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा दलबीच यसबारेमा छलफलसमेत भएको छैन। उच्चस्तरीय स्रोतका अनुसार अनमिन नेपालबाट फर्कनुअघि छिमेकी भारत संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुने सम्भावना छ। सदस्यता पाउनका लागि भारतले गरिरहेको लबिङले पूर्णता पाएमा आगामी माघपछि नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभुत्व झन् बढेर जाने विश्लेषकहरू बताउँछन्। केही समयअघि मात्रै भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले समेत भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्रका विपक्षमा भएका घटनालाई सामान्य ढंगले लिन नहुने बताएका थिए। ओबामाको भनाइ दक्षिण एसियाका कम्युनिस्टप्रति लक्षित रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति विदेशीहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, अनमिन गएपछिको अवस्थाका बारेमा उनीहरू मौन देखिएका छन्। भारत र चीन अनमिन फर्काउने पक्षमा रहे पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेको अवस्थामै अनमिनको फिर्तीप्रति अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, रुस, जापानलगायतका देश मौन रहनुका पछाडि सामान्य कारण छैन। लोकतन्त्रप्रति निष्ठा देखाउन नसकेको माओवादीले बजेट आउनुअघि संसद बैठकमा देखाएको चर्तिकलापछि माओवादीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय झन् सशंकित बनेको छ। अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएपछि सधैँभरि प्रजातन्त्रको बखान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वक्तव्य निकालेर सरकारको समर्थन गरेको घटनाले पनि माओवादीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कतिसम्म हच्केको रहेछ भन्ने देखाउँछ। संसदमा माओवादीले गरेको वितण्डापछि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एकतर्फी समर्थन लिन सफल भएको छ। माओवादी शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्न नचाहेमा सरकारबाट हुने दमनलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन जनाउने संकेत अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको समर्थनबाट देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भारतको सक्रियतामा माओवादी १२ बुँदे सहमतिमार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेका सात दल र हतियार बोकेर जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीबीच भएको मिलनप्रति पश्चिमा राष्ट्रहरूले भारतकै कारण समर्थन गरेका थिए। तर, अहिले पनि शान्ति र विद्रोहको दुईटै डुंगा चढेर आफूलाई माओवादीले धोका दिइरहेको निचोडमा भारतको संस्थापन पक्ष पुगिरहेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो नपुग्दा त्यसको जवाफ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भारतले पनि दिनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपालका माओवादीले भारतीय माओवादीलाई तालिम दिइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको घटनाले भारत र माओवादीको सम्बन्ध निकै चिसो बनिसकेको छ। भारतीय राजदूत राकेश सूदलाई सोलुखुम्बुमा माओवादीबाट आक्रमण भएपछि माओवादीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिभन्दा आतंकवादी संगठनकै रूपमा हेर्नेको संख्या झन् बढ्न थालेको छ। यस्ता घटनाक्रमले मुलुकलाई युद्धतर्फ धकेलेको विश्लेषण गर्नेहरू बढेका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई सरकार र माओवादीले अहिले नै आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्। अनमिनको उपस्थिति नभएपछि त्यो सम्झौतालाई आफू अनकूल व्याख्या गर्न झन् सहज हुनेछ। लडाकुलाई नेपाली सेनाकै दाँजोमा प्रस्तुत गरिरहेको माओवादीले अनुगमनकर्ता नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सार्ने बुझिएको छ। यो अवस्थामा सरकारले माओवादीमाथि बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्वभाविक परिस्थिति निर्माण हुनेछ। त्यतिबेला मुलुकमा अघोषित युद्ध सुरु हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। माओवादीले लडाकुलाई विशेष समिति मातहत ल्याउन तयार नहुनु बरु पार्टीको विस्तारित बैठकमा सहभागी गराएर प्रशिक्षण दिनुले पनि मुलुकमा शान्ति र संविधानको आवरणमा भित्रभित्र युद्धको कसरत भइरहेको संकेत मिलेको छ। पालुङटारमा भारतभक्ति छरपस्ट राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा भारतलाई गाली गरेर कार्यकर्ताबीच भ्रम छर्न सफल भइरहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भारतभक्ति पालुङटार बैठकमा छरपष्ट भएको छ। भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको आरोप सार्वजनिक गरिरहेका प्रचण्डले भारतीय राजदूतलाई पटक–पटक भेटेको रहस्योद्घाटन भएपछि माओवादीका इमान्दार कार्यकर्ताले पालुङटारमै शिर निहुर्याीएका थिए। प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै शान्ति र संविधानका लागि शान्तिपूर्ण बाटो अवलम्वन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष पक्षधर कार्यकर्ताले बारम्बार भारतपरस्तको आरोप लगाएपछि भट्टराई पक्षधरका कार्यकर्ताले प्रचण्डको भारतभक्तिलाई छताछुल्ल पारेका थिए। बैठकमा बाबुराम पक्षधर कैलालीकी लीला भण्डारीले प्रचण्डले भारतीय राजदूत राकेश सूदसँग ९ महिनामा ७१ पटक भेटेको रहस्य उद्घाटन गरेकी थिइन्। सडकमा भारतलाई गाली गर्ने तर, भारतीय राजदूतलाई बारम्बार भेट्ने प्रचण्डको शैलीले उनको दोहोरो चरित्र पनि प्रस्ट भएको छ। सभासद्समेत रहेकी भण्डारीको यो रहस्योद्घाटनपछि प्रचण्डको भ्रममा परेका धेरै कार्यकर्ता भट्टराईको पक्षमा पुगेको बताइएको छ।